October 10, 2021 N88LeaveaComment on कस्ताे अचम्मकाे रातो केरा, कहाँ पाइन्छ के-के छन् विशेषता
रातो केराको बारेमा सुन्नुभएको छ? हरियो, पहेँलो केरा त देखिएकै हो । के तपाइँले रातो रंगको केरा देख्नुभएको छ ? के रातो रंगको केरा पनि हुन्छ र ? भन्नुहोला । हाम्रो देशमा नभएपनि दुनियाका केही देशमा भने रातो केरा पाइन्छ । आउनुहोस एस्का फाइदा बुझौँ, जानौँ, र एस्को खेती गरौँ!!रातो केरा पाक्दा गहिरो रातो हुनुपर्दछ, […]
देउवा सरकारकाे दशैं उपहार : निहत्था जनताकाे छातीमा ताताे गाे’ली, मोतीपुरमा ४ सर्वसाधरणकाे मृ’त्यु
October 10, 2021 N88LeaveaComment on देउवा सरकारकाे दशैं उपहार : निहत्था जनताकाे छातीमा ताताे गाे’ली, मोतीपुरमा ४ सर्वसाधरणकाे मृ’त्यु
बुटवल । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आइतबार भएको झ’ड’पमा परि घाइते भएका चार जनाकाे मृ’त्यु भएको छ । झड’पमा परी घाइते भएका चारजनाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेज भैरहवामा मृ’त्यु भएको अस्पताल प्रशासनले पु’ष्टि गरेको छ । बुटवल वडा नम्बर १७ र १८ मा पर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा क’ब्जा’गरि बसेकाहरुलाई ह’टाउने क्रममा आइतबार प्रह’रीसँग […]
खालीपेटमा खानै हुन्न यी खानेकुरा… [ जान्नुहोस् ] स्वास्थ्य नै धन हाे
October 10, 2021 N88LeaveaComment on खालीपेटमा खानै हुन्न यी खानेकुरा… [ जान्नुहोस् ] स्वास्थ्य नै धन हाे
बिहान उठेर धेरै मान्छे चिया र कफी वा खाजामा फलहरु खाने गर्छन् । तर यो शरीरको लागि कत्तिको लाभदायक छ त ? दिनभर उर्जावान बन्नको लागि बिहान खाजा खानु आवश्यक छ । खाजामा पोषणले भरिएको खाद्यपदार्थ पनि खानुपर्छ । तर कैयौ पटक जानकारीको अभावमा मान्छे खाजामा गलत खानेकुराको सेवन गर्ने गर्छन् । जसको कारणले पाचनसँग […]
६ वर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाएर विश्वभर चर्चामा रहेका यी बालक काे हुन् ?
October 10, 2021 N88LeaveaComment on ६ वर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाएर विश्वभर चर्चामा रहेका यी बालक काे हुन् ?
एजेन्सी । मानिसहरुले आफ्नो शरिर फिट राखिराख्न विभिन्न उपायहरु अपनाइरहेका हुन्छन् । शरिरलाई स्वस्थ र बलियो राख्न बिहान बेलुका शारीरिक ब्यायाम पनि गर्ने गर्छन् । हामिले धेरैजसो युवा अवस्थाका मानिसले मात्र शारीरिक ब्यायाम गरेको देखेका हुन्छौ । युवा नै बिहान बेलुका जीम जाने तथा शारीरिक ब्यायाम गर्ने गर्छन् । तर एक साना बालक छन् जसले […]
नवनियुक्त मन्त्रीलाई माधव नेपालको कडा हुकुम !
October 10, 2021 N88LeaveaComment on नवनियुक्त मन्त्रीलाई माधव नेपालको कडा हुकुम !
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बदनामी हुने र विवादमा पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार पार्टी कार्यालय तीनकुनेमा पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई बोलाएर अध्यक्ष नेपालले ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र, पार्टी र जनताले सुम्पेको भन्दै बदनामी हुने र विवादमा पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । […]
एमालेमा यति ठूलो संकट, ओलीसमेत चुप, नेता कार्यकर्ताहरु बने निराश !
October 10, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा यति ठूलो संकट, ओलीसमेत चुप, नेता कार्यकर्ताहरु बने निराश !
काठमाडौं । नेकपा एमालेमाथि आज ठूलो बज्रपात हुने भएको छ । बागमतीमा एमाले सरकार ढल्ने पक्कापक्की छ। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आइतबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदै छिन् । तर, अल्पमतमा रहेकाले ५४ दिनमै उनको कार्यकाल सकिने लगभग पक्का छ । उनी २ भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । गत २५ भदौमा एमाले विभाजनको आधिकारिक पत्र प्रदेश […]
रमेश खरेलले गरे नेपाल सुशासन अभियानको घोषणा
October 10, 2021 N88LeaveaComment on रमेश खरेलले गरे नेपाल सुशासन अभियानको घोषणा
काठमाडौं । दुई दिनअघि नयाँ दल दर्ता गरेर सक्रिय राजनीतिमा होमिने घोषणा गरेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले नेपाल सुशासन अभियानको सुरुवात गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खरेलले अभियानको घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले दलहरूले नेपाललाई अफगानिस्तान, सुडानजस्तो बनाउन लागेको आरोप लगाए । दुईतिहाइ बहुमत दिएर दलहरूलाई जिताउँदा पनि […]
‘जेठान साप’को राजीनामापछि प्रधानन्यायाधीश राणा पनि ‘आउट’ !
October 10, 2021 N88LeaveaComment on ‘जेठान साप’को राजीनामापछि प्रधानन्यायाधीश राणा पनि ‘आउट’ !
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट’ गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु न्यायिक आचरणबाहिरको काम भएको धारणा राखे । […]
जेठानलाई मन्त्री बनाउँदा राणाकाे उठीबास, अदालत छिर्नै न’दिने वकिलहरुको घोषणा ! बारले क’ठाेर स्टेप चाल्दै…
October 10, 2021 N88LeaveaComment on जेठानलाई मन्त्री बनाउँदा राणाकाे उठीबास, अदालत छिर्नै न’दिने वकिलहरुको घोषणा ! बारले क’ठाेर स्टेप चाल्दै…
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा उनले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । रिपोर्टर्स क्लबमा शनिबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘उहाँले मात्रै […]
देउवाले राणाका जेठानलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि गगन थापाले खोले फा’यर: देउवा टे’न्सनमा
October 10, 2021 N88LeaveaComment on देउवाले राणाका जेठानलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि गगन थापाले खोले फा’यर: देउवा टे’न्सनमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले कानुनका छिद्रबाट छिराइएको निर्णयले अनन्तका’लसम्म ल’खेट्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धन सरकारले प्रधानन्यायाधीशनिकट गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोप्रति सं’केत गर्दै थापाले शनिबार ट्वीटमार्फत यस्तो बताएका हुन्। प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर राणाका ज्वाईलाई नै मन्त्री बनाईएपछि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा मैदानमा उ’त्रिएका छन् । […]